सरकाले युवालाई दश लाख रुपैयाँ ऋण दिदैं, कस्ताले पाउँछन् ? हेर्नुस् - Everest Dainik - News from Nepal
सरकाले युवालाई दश लाख रुपैयाँ ऋण दिदैं, कस्ताले पाउँछन् ? हेर्नुस्
काठमाडौं, मंसिर १० । वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फिर्ता भएका युवालाई सरकारले दश लाख ऋण दिने भएको छ ।
स्वदेशमै उद्यमशीलता निर्माणमा प्रोत्साहन गर्न युवाका लागि सरकारले १० लाख ऋण दिने भएको हो । दश लाख रुपैयाँको जम्मा दुई प्रतिशत मात्र व्याज लाग्ने छ ।
विदेशबाट फर्केका यावालाई वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले सरल कर्जा लिनका लागि आग्रह गरेको छ । एक सूचना प्रकाशित गरी वोर्डले आउँदो पुस मसान्तसम्म निवेदन पेश गर्न भनेको हो ।
युवाहरुले व्यवसाय परियोजना धितो राखेर ऋण पाउने छन् । त्यसका लागि कम्तीमा ६ महिना विदेश बसेर फर्केको युवाले व्यवसाय खुलेको विवरण पेश गरेपछि ऋण दिने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
बोर्डका सूचना अधिकृत दिनबन्धु सुवेदीका अनुसार कुनै पनि विदेश बसेका युवाले परियोजना पेश गरेपछि तीन वर्षभित्र ऋण लिइसक्नुपर्ने छ।
ऋण लिने युवाले पाँच वर्षमा ऋण भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । सरकारले ब्याजमा अनुदान दिनेसमेत योजना बनाएको छ ।
विदेशबाट फर्केकाहरुले आफूले सिकेको ज्ञान, सीपका आधारमा फारम भरी निवेदन पेश दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। उद्यमशीलता बढाउन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनउन, वैदेशिक रोजगारबाट युवालाई फर्काउन ऋण लगानी गर्ने सरकारले यसअघि निर्णय गरेको हो ।
युवाले पेश गरेका परियोजना फारमका आधारमा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयसँग छलफल गरी ऋण प्रदान गरिने छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा सम्बिन्धत जिल्लाका बैंकले ऋण दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
ट्याग्स: loan, money, Youth